IConga Contract Lifecycle Management: Ukuphucula ukuSebenza ngokuThengisa ngamaXwebhu okuhamba ngokuZenzekelayo | Martech Zone
Ukuqhuba ishishini elizive lingenangxwabangxwaba kumthengi ebusweni bentengiso ekhulayo kubunzima akukho lula. Ubungcali beConga kunye nesisombululo esibanzi sokwenza izinto zorhwebo-iinkqubo ezijikelezileyo Qwalasela ixabiso lamaxabiso (CPQ), Ulawulo lobomi boMthengi (CLM), kunye Amaxwebhu edijithali - Unceda amashishini ajongane nobunzima ngokuzithemba ukuze bakwazi ukubonelela amava abathengi angenabuzaza nokukhawulezisa ingeniso.
NgeConga, amashishini ahamba ngokukhawuleza ukukhawulelana neemfuno zabathengi namhlanje ngelixa esonyusa amandla okulungiselela ingomso elingaqinisekanga. IConga's Uxwebhu loTshintsho loXwebhu lwedijithali luyilelwe ukusebenza nomxube wetekhnoloji yenkampani yakho nokudibanisa ngokuthe ngqo neCRM yakho.
Yintoni uLawulo lobomi bekhontrakthi?
Ulawulo lobomi bekhontrakthi kukuqhubekeka, indlela yolawulo yesivumelwano ukusuka kulwaluko ngokunikezela, ukuthobela kunye nokuhlaziya. Ukuphunyezwa kwe-CLM kunokukhokelela kuphuculo olubonakalayo lokonga iindleko kunye nokusebenza kakuhle.
IConga ikhontrakthi yoLawulo lobomi
IConga CLM kukuphela kokuphela Ulawulo lobomi bekhontrakthi (CLM) isisombululo esiphelisa ixesha leenkqubo zesandla kunye nezingadityaniswanga kunye nokuhambisa amava akumgangatho ophezulu kubo bobabini abathengi bangaphakathi nabangaphandle. IConga CLM iqhuba ngokugqwesa kwisivumelwano, iyanciphisa amaxesha okujikeleza, iphucula iziphumo zothethathethwano, kwaye inciphisa umngcipheko. Yakhelwe kwilifu, uConga uqhagamshele ngaphandle komthungo kunye nezisombululo zeCRM zokwenza lula imisebenzi yorhwebo. IConga ixhobisa onke amasebe kuhambo lwawo lokufezekisa impumelelo kwezorhwebo.
Isisombululo esibanzi seConga sixhobisa ingeniso, ukusebenza, kunye namaqela asemthethweni ukusombulula ubunzima beshishini ngokulula. Sikhona ukunceda ukukhawulezisa ishishini, ukulungisa imisebenzi, kunye nokuguqula amava abathengi. Ngezisombululo zabo nabuphi na ubungakanani beshishini, sizimisele ukuhlangana namashishini kanye apho baya kwenza umbono ocacileyo wokuba bayokulandela phi.
UFrank Holland, u-CEO we-Conga
IConga CLM sisixhobo sokuqala solawulo lwekhontrakthi sokusebenzela onke amanqanaba egophe lokukhula ukusuka kumqali ukuya kwingcali kuzo zonke iikhontrakthi. Imakethi yezomthetho ayikaze ibekho nomrhumo omnye osuka kwisiphelo esisezantsi ukuya esiphelweni esiphezulu kwigophe lokuvuthwa. Ngenxa yoko, i-Conga CLM ayisiyonto intle kuphela kwiinkampani ezikhula ngokukhawuleza, kodwa amandla okufumana amashishini ngoku ayafumaneka kumashishini amancinci e-SMB / aphakathi ngexabiso eliphantsi.
Abasebenzisi beSalesforce banokulawula iikhontrakthi ngqo kwisicelo ngelixa besebenzisa ulawulo lobomi bekhontrakthi (i-CLM) ukusuka kwindalo ukuya kutyikityo. Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa iqela lakho lokuthengisa linokugcina nokulawula iikhontrakthi ezingenamda, ukuvelisa iingxelo, ukulandelela ukuhlangana, nokunye okuninzi.
Ukuzenzekelayo koXwebhu lokuHamba koMsebenzi kuXwebhu
Amaxwebhu eConga enza lula kwaye andise amaxwebhu abalulekileyo emihla ngemihla ngelixa ekhulula abasebenzi ukuba benze okungakumbi. Imibutho inokwenza ngokulula nangokufanelekileyo ukuyila, ukulawula, ukusebenzisana kunye nokusayina onke amaxwebhu abalulekileyo kwishishini.
Ukuzenzekelayo kuthatha umsebenzi ngaphandle kwenkqubo kwaye kususe amanyathelo omsebenzisi anokukhokelela kwiimpazamo, konga ixesha elibalulekileyo, kwaye kukonyusa ukusebenza kakuhle kunye nemveliso. I-eSignature ekhuselekileyo, edityanisiweyo yokwenza ukuba kube lula kunangaphambili ukugqibezela amaxwebhu abalulekileyo, abopha ngokusemthethweni nakweyiphi na indawo. Ngezisombululo zamaXwebhu amaConga, imijikelezo yeshishini iqinisekisiwe ukuba ikhawuleza.
Yintoni eQulunqwayo, amaXabiso, amaXabiso (CPQ)?
Conga Qwalasela, amaxabiso, ngesisombululo seXabiso
IConga CPQ yi Qwalasela ixabiso lamaxabiso (CPQ) isisombululo esikhokela amaqela okuthengisa ekwakheni nasekwenzeni ngcono izibonelelo ngokuxhobisa abathengisi ukuba bakhethe eyona mxube ilungileyo yeemveliso kunye neenkonzo (imirhumo, iinkonzo zasemva kophawu, kunye neenkonzo zobungcali) kwikhathalogu yendalo iphela. IConga CPQ emva koko iqulunqa izisombululo, iphumeze iimodeli zamaxabiso, kwaye ivelise isicatshulwa esifanelekileyo sokuphumelela. IConga CPQ iququzelela amava okuthengisa ukusuka kulwazi lomthengi kunye neenjongo zokuthenga ngokuthenga, enceda imibutho ukuba ifezekise ukugqwesa kwezorhwebo ngokuxhobisa amaqela okuthengisa ukuba athengise ngokufanelekileyo ngaphandle kwexesha elincinci.
Itekhnoloji yeConga yenza ukuba amashishini abungakanani bonke, kuwo onke amashishini kwihlabathi liphela, ukuba afake ekhompyutheni amaxwebhu kunye nezivumelwano ezenza ukuba ishishini labo liqhubeke. Iziphumo zivelisa ukonga indleko, imida ephezulu yenzuzo, ukufikelela ngokukhawuleza kwiimveliso kunye neenkonzo, kunye nokukhawulezisa isantya seshishini.
Fumana iDemo yeCongo
tags: b2bcongaconga clmconga cpqikhontrakthi ezenzekelayolawulo lwe mvu melwanocpqCRMUlawulo lobomi bamakhasimendeulawulo lwexwebhuesignisignatureukuthengisaukujikeleza komsebenzi